एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पिर जलेको हेर्न बाध्य भए आमाबाबु, हेर्दाहेर्दै १५ वर्षीय छोरा समिरले संसार छोडे ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पिर जलेको हेर्न बाध्य भए आमाबाबु, हेर्दाहेर्दै १५ वर्षीय छोरा समिरले संसार छोडे !
बुटवल – गुल्मीको चन्द्रकोटमा किराना पसलमा आगलागी हुँदा एक जनाको निधन भएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका–४ शान्तिपुरको बसपार्कमा रहेको खनाल स्टोर्समा आगलागी हुँदा पसल सञ्चामलक पूर्ण खनालका छोरा १५ वर्षीय समिर खनालको निधन भएको हो।
खनाल र उनकी श्रीमती रुपा आगलागीमा परेर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि पाल्पा रिफर गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । लकडाउनका कारण तीनै जना घरमा थिए । आगलागी सुरु हुनासाथ आमाबुवा बाहिर निस्कन सफल भएपछि समीर बाहिर नसक्दा उनको ज्यान गएको हो । आगलागी सुरु हुनासाथ बुवाआमा बाहिर निस्के तर छोरा सकेनन्, उनको ज्यान गयो’ खत्रीले भने ।
खत्रीका अनुसार खाद्यान्न र ग्यासको समेत पसल रहेको साढे दुई तलाको पक्की घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। घरको भुइँतलामा रहेका समिरको घटनास्थलमै निधन भएको छ भने उनका बुवाआमा दुवै जना घाइते भएकोले उपचारको लागि पाल्पा मिसन अस्पतालमा पठाइएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। जेठो छोरा भने घरको माथिल्लो तलामा रहेको कारण छतबाट बाहिर हाम फालेर ज्यान जोगिएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पिर जलेको हेर्न बाध्य भए आमाबाबु । आगलागी कसरी भयो यसबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। आगलागीपछि ग्याँसको सिलिण्डर पड्किँदा घरमा बढी क्षति भएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए।
खनाल परिवार शान्तिपुर बजारको घरमा पसल गर्थे । उनी बाग्लुङको बरेङ्ग गाउँपालिका ३ का वडध्य्क्ष समेत रहेको खत्रीले जानकारी दिए । पसलबाट डिजल, पेट्रोलसमेत बिक्री गर्दै आएकाले आगो निभाउन समय लागेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीले पसलको सबै सामग्री जलेर नष्ट भएको छ।
आज पनि पानी पर्ने सम्भावना, सचेत रहन आग्रह